My 10 Matipi ekugadzirisa yako Blog | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 13, 2006 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Computer Shopper ine chinyorwa pa Kugadziridza yako Blog. Chinyorwa ichi chine mamwe mazano anobatsira asi handifunge kuti vakawana zvavanokoshesa zvakanaka uye havana kufukidza zvese zvakakosha. Ndanga ndichikura zvakatsiga traffic kublog rangu pamwedzi mishoma yapfuura. Ndanga ndichinyatso kuyera kuverenga kwangu, masosi evaverengi vangu, uye ndichigadzirisa zvinoenderana. Ini ndadzidza tani pamusoro pemwedzi mishoma yapfuura.
Heino yangu Gumi Gumi:
Usatombo kunetseka nezvekuti yako blog inotaridzika sei. Ini handibvumirane nechinyorwa pane ino pfungwa. Mazhinji mabloggi akareruka, uye mamwe makuru mabloggi haana kunaka. Vanhu vanokwezvwa nemhando yezvinyorwa, kwete marongero akanaka. Iko kusarudzika, chokwadika, ndeye kana iwe ukabloga nezve dhizaini uye mifananidzo
Isa pikicha kana mapikicha ako akawanda pane saiti. Tarisa uone pikicha yangu mumusoro mangu pamwe nemufananidzo pane wangu About peji. Iyo blog ndeye hurukuro nevadzidzi vako. Zvakaoma kuva nehurukuro iwe usingazive wauri kutaura naye!
Ive neshuwa yekushandisa blogging software iyo ine zvinotevera zvinhu: trackbacks, pings, zvinongedzo, ma tag, zvikamu, zvibvumirano, zvirevo, tsvaga, sitemaps, spam kudzivirira, kutsvaga uye RSS. Dzidza maitiro ekushandisa ese iwo zvinobudirira. ndinoshandisa WordPress. Inoda mamwe mapulagi emamwe maficha, asi zviri nyore kushandisa uye yakasimba kwazvo. Panzvimbo pekugamuchira neWordPress, ini ndakadhonza iyo software ndikazvigamuchira pachangu - nenzira iyoyo ini ndinotonga pamusoro peiyo software, dhata, URL uye kushambadzira - uye ndinogona kuzvigadzirisa zvandinofarira.
Saina kune imwechete sevhisi senge Technorati kuwedzera kubhenekerwa kune yako blog. Vatsva vanotsvaga Technorati kuburikidza nekumaka kuti vawane zvinyorwa zvekuverenga.
Paunowana blog yaunofarira chaizvo, isa chinongedzo kwairi pane yako saiti. Tarisa uone zvinongedzo zvangu parutivi rwangu. Usave unonyara uye bvunza vaverengi vanofarira bhurogu yako kuti vaise chinongedzo kune chako. Sekuwedzera uye kwakawanda nzvimbo dzinobatanidza kune yako blog, yako blog inozoenderera nekuwedzera yayo simba. Izvi zvichavandudza kuiswa kwayo mumablog search injini.
Kutanga kushandisa yakanaka RSS muverengi uye tanga kunyorera kune akati wandei mamwe mablog. Ini ndinonyorera kune angangoita makumi matatu izvozvi uchishandisa Google Labs Reader. Ino chengetedza izvo zvandakaverenga uye iine zvimwe zvishoma zvinotonhorera maficha. Ini ndinotaura kazhinji pane zvimwe zvinyorwa uye ndinogara ndichisiya chinongedzo kudzokera kune yangu saiti. Kana ini ndichida kunyora yakazara posvo pane kutaura, ini ndinogara ndichivimbisa kuti ini ndinotema trackback kuchinyorwa chavo.
Shandisa chishandiso chakanaka cheAnalytics. ndinoshandisa Google nekuti zvese zviri mahara uye zvakapusa kubatanidza neWordPress. Ini ndinongoisa chidiki script (icho chinopihwa neGoogle) mutsetse wenyaya yangu uye ndakanaka kuenda! Kuongorora yako Analytics kuchakubatsira iwe kuona kuti vaverengi vari kusvika sei kune yako saiti, kufarirwa kwezvinyorwa zvako, uye ndeapi mazwi ekutsvaga ari kuvakwezva, nezvimwe.
Shandisa chishandiso chekudya. ndinoshandisa Feedpress. Iyo ine toni yezvimwe zvekuwedzera nazvo uye inokutendera iwe kuyera yako yekushandisa kushandiswa. Izwi rimwe remazano, ita shuwa kutsiva yako blog musoro weRSS kudomwa. Mazhinji maRSS ekushandisa maturusi anongotsvaga chinongedzo icho mumusoro. Kana iwe ukasaitsiva iyo yako Feedburner RSS nzira, iwe hausi kuzove unotora vese avo vanonyoresa!
Blog kazhinji. Nebhurogu yangu, ndinoona kuti kana ndikanyora 1 kana maviri zvinyorwa zuva nezuva kuti vashanyi vangu vanodzoka vanoramba vachiwedzera. Sezvineiwo, kana ndikasvetuka zuva ndinofanira 'kubata' kumashure kune vashanyi. Kana ndikasvetuka 2, ndinorasikirwa akati wandei. Ngwarira kuti usabloga kazhinji, zvakadaro. Ndaiwanzonyorera Instapundit, asi mitsara yemutsara zvinyorwa maminetsi mashoma aindifambisa nzungu kuyedza kuenderana. Akave nekubudirira kukuru nebhurogu yake, zvakadaro. Vamwe vanhu vanozvifarira. Ini ndinofungidzira ichi chingori chimwe chezvinhu izvo zvauchazofanira kuteedzera uye nekuona kuburikidza nekuyedza uye kukanganisa. Chimwe chinhu apa inguva. Ita shuwa kuti kana iwe uchinzwa kana kuona chimwe chinhu pane musoro wenyaya, iwe unoita nekukurumidza sezvinobvira kana iwe uchida kukura vateereri vako. Vaverengi vanotsvaga zvakanyanya panguva yechiitiko, kwete mushure.
Blog zvakanaka. Iwe haufanire kugara uchigara pamusoro wenyaya neako blog. Rangarira, iyo blog ndeye hurukuro pakati pako nevadzidzi vako. Vari kukuziva uye iwe uri kuyedza kuti uvazive. Mifananidzo miviri yezororo rako kana imbwa yako ichavarega vapinde munyika yako zvakadzama uye vagadzire kubatana kukuru navo. Ini ndinowanzo shandisa nguva zuva rega rega kufunga nezve izvo zvandaigona blog pamusoro pazvo. Hapana zuva rinopfuura ndisina kudzidza chimwe chinhu, kucherechedza chimwe chinhu, kana kunzwa nezve chimwe chinhu… saka ndinonakidzwa nekuchidzosera kuvaverengi vangu. Iva akatendeseka, uye taura kune zvaunoita zvakanaka.
Saka ndizvo zvandakadzidza kusvika ikozvino. Ini ndichaenderera mberi nekugadzirisa kune yangu blog kuwedzera kuwonekera uye kuvandudza mhando yezvangu zvinyorwa. Blogging ndezve kuenderera kuvandudza.
Ndingakurudzirawo zvimwe zvekuverenga… zvandinofarira ndizvo Kukurukurirana Wakashama, asi ini ndawana runyorwa rukuru rwemamwe mabhuku ekublogi pa Shanduko.
Kwidziridzo: Nyamavhuvhu 17, 2006 - Yakatumirwa yeProBlogger's Boka Kunyora Project yeList.
Tags: Analyticsblog dhizainiBloggerBloggingCategoriesmashokochikafukutangawobvaLinkspermalinksmapeniRSSTsvaga KutengesasidebarSitemapsspam kudziviriraTagstechnoratitrackbacks
Aug 13, 2006 na8: 00 PM
Yakanaka post Doug! Sekupusa sezvazvinogona kunzwika, ndine matambudziko nenhamba 3. Ndine mufananidzo mumwe chete wandinoisa pane yangu About peji, asi zvaive ZVAKAOMA chaizvo kwandiri kuti ndiite. Ini ndaiwanzoisa pablog rangu kuitira kuti baba vangu vakurumidze kurangarira kuti nei vaimaka peji racho - asi zvakandiita kuti ndisanzwisisike! Ndinofanira kutora mumwe mufananidzo kumusoro. Wataura chokwadi - ndinogara ndichifarira mifananidzo - ndinoda kuziva wandiri kutaura naye! (BTW - ndiwo mufananidzo wakanaka mumusoro wako!)
Aug 14, 2006 na12: 54 PM
Wakanganwa zvimwe zvakakosha, izvo zvandinozopa nemufaro kupfumisa iyi yakanaka blog.
(1) Dhizaini ndiyo yekutanga kukosha kwechero webhusaiti zvinoenderana neStanford Persuasive Tech uye BJ Fogg, PhD. Kana ichitaridzika kunge porny, amateur, yakashata, isina kusimba, yevana, nezvimwewo, vashandisi vanozo bhaara mumasekondi uye havazombodzoka
(2) Yakapfuma, Yakajairika, Yakakodzera Zvemukati.
(3) Matt Mullenweg akandiudza chakavanzika chake chikuru ndechekudyidzana neiyo blogosphere, kupindurana kutaura, kutumira makomendi kune mamwe mablog, kutumira email kune mamwe mabloggi ane ruzivo rwakakosha kana kuraira, nezvimwe. Iva muvakidzani akanaka munharaunda yemablog.
(4) Zvakasiyana-siyana. Zvinoshamisa zvisingatarisirwi. Kuedza.
(5) Multi Media: podcasts, vhidhiyo player inodzika, mifananidzo, hunyanzvi, makatuni, magirafu, machati, nezvimwe.
(6) Kupindura nekukurumidza kumashoko akanyorwa pane yako blog, pindirana nekuvimbika uye zvine mutsindo nevaverengi vako.
(7) Pamberi peprofile kana NezveIni, uye kumberi Info info kana fomu rewebhu rewebhu.
(8) Rondedzero ye "inonyanya kuzivikanwa zvinyorwa" kana zvimwe zvinokatyamadza zvikamu mune yepadivi bar, pamwe neazvino Mapositi uye Mwedzi Archives.
Ingori matipi mashoma pazvinhu zvandiri kufunga zvakakosha.
Kukadzi 11, 2007 na3: 47 PM
Zano rakakura, ndatenda. Ndakaedza kutora rairo yako pa # 7 uye ndoshandisa Google Analytics, asi ndinofanira kubvuma kuti rairo yavo haina kunzwisiswa kune vasiri-technical, vashandisi veWordPress seni. Kune hupenyu hwangu, ini handikwanise kufunga kwekuisa kodhi iyo yavari kundiudza yandinofanira kuisa.
Feb 13, 2007 at 1:57 PM
Mhoro Doug, ndambomira newebsite yako kakati wandei uye ndinonakidzwa nezvandinoona uchiita. Iwe wakasimbisa dzimwe nzvimbo dzakakodzera dzinotibatsira isu tese kuongorora maturusi atiri kushandisa parizvino pamablog edu. Thanks mamwe mazano akanaka.
Kukadzi 13, 2007 na12: 09 PM
Ndatenda zvikuru nekuda kwemashoko ako emutsa, Robyn! Uye nekutenda nekushanya !!!
Jun 7, 2007 pa 10: 25 PM
Yakanyanya kunaka uye yakanyorwa zvakanaka chinyorwa. Ini zita rangu ndinonzi Garry uye ndinonyora pane yangu yega blog inopa zvinobudirira blogging matipi evaverengi vangu. Ini ndanga ndichitsvaga paGoogle zvinhu zvekunyora nezvazvo ndikawana chinyorwa chako pano. Rakanaka basa uye ini ndichave nechokwadi chekupa chinongedzo kuchinyorwa chino pane yangu inotevera posvo. 🙂
Jun 8, 2007 pa7: 51AM
Ndatenda Garry! Ini ndichave ndichitarisa yako saiti munguva pfupi.
Mbudzi 28, 2007 na2: 31 PM
Ehe, iyi blog inotonhorera kwazvo. 😉
Ini ndangokuwedzera iwe kune vandinoda.
Jul 26, 2011 na8: 36 PM
Iyo yakanaka zano, ini ndinongoziva kuti zvakare ine simba zvakanyanya pane dzekutsvaga injini, nekuda kwemazano ake